Home Wararka Wajagabixii Kheyre ee cashadii xalay? Deni & Lafta Gareen maxay qoonsadeen? Maxadan...
Wajagabixii Kheyre ee cashadii xalay? Deni & Lafta Gareen maxay qoonsadeen? Maxadan ogayn oo dhacay?
Xasan Cali Kheyre ayaa sadaxdii habeen u danbeeysay waxa uu ku mashqulsanaa sidii uu casho sharaf magaciisa ah ugu sameeyn lahaa madaxda Dowlad Goboleedyada iyo Ra’iisal Wasaare Rooble ee ku sugnaa magalaada Muqdisho. Habeenkii xalay ahaa cashadii la qorsheeyay waxa ay dhacday iyada oo aan marnaba la soo hadal qaadin magaca Kheyre isla markaana qaar kamida madaxda Dowlad Goboleedyada ay gabi ahaanba ka baaqsadeen.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland, Saciid Cabdullahi Deni ayaa gabi ahaanba ka soo horjeestay in uu ka qaybgalo casho lagu soo qaban qaabiyay magaca Xasan Kheyre. Fartiintaas oo uu u keenay Axmad Madoobe ayuu sheegay Said Deno in maranaba uusan soo xaadiri doonin xafalad noocaas.
Waxaa sidoo kale isna ka biyo diiday in uu cashadaas soo xaadiro Madaxaweyne Lafta Gareen; labadaas madaxweye oo inta badan aanan isku aragti ahayinin dhanka siyaasada ayaa isku waafaqay in ay qaadacaan xafalad Kheyre magaciisa lagu dhigayo. Waxa isna si dadban u sheegay in uusan imaanaynin xafaladaas Cali Guudlawe, inkastaa oo uu markii danbe yimid marka magaca Kheyre laga saaray meesha.
Axmad Madoobe ayaa ugu danbeeyntii waxa uu keenay talo ah in Xafalada noqoto mid uu soo qaban qaabiyay Wasiir Islaw, laguna qabto hotel uu ku dhex leeyahay garoonka diyaaradaha dhexdiisa. Madaxdii ka soo qaybgashay cashadaas ayaana ku adkeysay in warbaahinta loo sheego in casho sharftaas uusan lug ku lahaynin Xasan Kheyre.
Xasan Kheyre oo wajigabax ka muuqdo ayaan cashada soo xaadiray iyada oo qaar kamida madaxda dowlad gobolleyda ay ka cudurdaarteen. Dhanka kale, Kheyre ayaa laga maamnuucay in uusan facebookiisa ku shaacin xafaladii xalay.
Wixii xalay ka dhacay Hotelka Chelsea waxa ay cadeeyn u tahay in Xasan Cali Kheyre uusan wax karaamo ku ag lahaynin madxada Dowlad Goboleedka iskaba daa shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan shacabka ku dhaqan magalaada Muqdisho kuwaas oo uu seddex sano bar ku dulmayay magac Dowladda.